မြရွက်ဝေ: ပျင်းတဖက် ဟင်းချက်
သူငယ်ချင်းက ဝက်သားဟင်းချက်နည်းရေးပေးမယ်ဆိုလို့ မေးလာလို့ ကြောင်တောင်တောင် ဖြစ်သွားတယ်။ ဘယ်တုန်းက ပြောမိပါလိမ့်ပေါ့။ နောက်မှ အင်မီဂရေးရှင်းရုံးမှာ ထိုင်စောင့်တုန်း တောင်ရောက်မြောက်ရောက် စကားတွေပြောရာက ပြောမိတာထင်တယ်။ ဟင်းချက်နည်းသက်သက်ရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်လဲ ခုထိစမ်းတဝါးဝါးနဲ့ချက်တုန်းမို့ပါ။ တကယ်က ဟင်းချက်နည်းဆိုတာထက် အပျင်းတက်နည်းပါ။ သူငယ်ချင်းက အသားတွေကို ရေခဲရိုက်ပြီး ဟင်းချက်တဲ့အခါ စားမကောင်းဘူးပြောရာက စတာ။
အိမ်မှာလဲ အရင်က အသားတွေ အများကြီးဝယ်ပြီး ခဲထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဟင်းမချက်ခင် အခဲဖျော်ရရင် အခက်တွေ့တယ်။ မိုက်ခရိုဝေ့နဲ့ အခဲဖျော်လို့ရလဲ ဘေးသားတွေသာ အရင်ပျော်ပြီး အလယ်က ခဲကောင်းတုန်း။ အလယ်က ပျော်အောင်ထားပြန်ရင် ဘေးအသားတွေက ကျက်ခါနီးလောက် ဖြစ်သွားပြန်ရော။ အဲဒီအခါကျ ဟင်းချက်ရင် အရသာ မဝင်တော့ပါဘူး။ အဲဒီတော့ ညနေ ဒီဟင်းချက်မယ်ဆို မနက်မှာ အသားကို အပြင်ထုတ်ထားရတယ်။ ဒါမှမဟုတ် တရက်ကြိုပြီး အောက်ဘက်အဆင့်ထဲ ပြောင်းထားရတယ်။ အဲလို ထားဖို့ မေ့သွားရင်တော့ ချက်ခါနီး ပျာယာခတ်ပြီ။
ဒီနောက်ပိုင်းတော့ အသားတွေကို မခဲခင် ဆား အသားမှုန့် ဂျင်းနဲ့ နယ်နှပ်လို့ ရေနဲနဲနဲ့ ပြုတ်ထားဖြစ်တယ်။ အဲဒါကို သူငယ်ချင်းက ဟင်းချက်နည်းထင်သွားတယ် မှတ်တယ်။ အသားတွေကို အဲလိုပြုတ်ထားလိုက်တော့ ဟင်းချက်ချင်ရင် အရင်ကထက်တော့ မြန်သွားပါတယ်။ အသားထဲလဲ အရသာဝင်ထားတာမို့ ဟင်းချက်ရတာ မြန်ပါတယ်။ အဲ အသားများများ ဝယ်လာမိတဲ့နေ့ကတော့ မသက်သာပါဘူး။ ဝက်သား (အသား နံရိုး) ကြက်သား (ပေါင်သား တောင်ပံအရင်း အဖျား အသည်း အမြစ် စိတ်ကူးရရာ ၂မျိုး ၃မျိုး) အပြင် ခုနောက်ပိုင်း သွေးအားနည်းလို့ အမဲသားကိုလည်း တခါတလေ ဝယ်ဖြစ်တယ်။ တရက်ထဲနဲ့ မလုပ်နိုင်ရင် expire dateအလိုက် တန်းစီပြုတ်ပါတယ်။ ပြီးရင် အအေးခံလို့ တခါထဲ ဟင်းချက်ဖို့ စိတ်ကူးရရင်လဲ ချက်၊ မရရင်လဲ လှီးပြီး ဘူးတွေနဲ့ ထည့်ထားလိုက်တယ်။ ပုံထဲမှာတော့ ကြက်တောင်ပံအရင်းကို ပြုတ်ပြီး အသားမဆလာနဲ့ ပြန်ကြော်ထားတာရယ်၊ အမဲသားပြုတ်ကို အတုံးလိုက် လှီးထားတာနဲ့ အလွှာလိုက်လှီးထားတာရယ်၊ ဝက်သားပြုတ်တချို့ကို အစပ်ဟင်းချက်ထားတာနဲ့ ပိုတာကို ဒီအတိုင်း ထည့်ထားတာရယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူနီဂျင်း ဆီသပ်တဲ့အနှစ်ပါ။
ဆီသပ်တဲ့အနှစ်အကြောင်းပြောရင် ဂျင်းက စရမယ်။ အများအားဖြင့်တော့ ဂျင်းကို အသားတွေ အများကြီးဝယ်တဲ့နေ့မှာ ဝယ်ပါတယ်။ ဂျင်းဝယ်ရင်လည်း ၁ထုပ်မှာ ဂျင်းတက် နှစ်တက်လောက် ပါတယ်။ အသားတွေကို ပြုတ်ပြီး အများကြီးပိုနေရင် ကိုယ်တိုင်ဘဲ မထားတတ်လို့လားတော့မသိဘူး ဂျင်းတက်တွေ ကြာကြာအထားမခံပါဘူး။ ရေခဲသေတ္တာထဲထားရင်လဲ ပုပ်၊ အပြင်မှာထားတော့ ခြောက်နဲ့ရယ်။ ကြက်သွန်နီဆိုတာလဲ အကြီးကြီးတွေမို့ တခြမ်းလောက် ဟင်းချက်ပြီး နောက်တခြမ်းကို ၂ရက်အတွင်းလောက် ချက်မှ ကောင်းပါတယ်။ ၂ယောက်ထဲနေတဲ့အိမ်မှာ အဲလောက်အမြန်ချက်ဖို့လဲမလိုတာမို့ ကြက်သွန်နီက အပင်ပေါက် ဂျင်းကခြောက်မို့ လွှတ်ပစ်ရတာတွေရှိတယ်။ ဒီတော့ တခါတလေ ဆီသပ်အနှစ်လုပ်ထားလိုက်တယ်။ ငရုတ်ဆုံထောင်းလို့မဖြစ်တော့ Minichoppaလေးနဲ့ ကြိတ်တယ်။
ဆီပူထဲ ဆနွင်းလေးထည့်လို့ ဆီသပ်ပါတယ်။ နဲနဲ စိုစိုအနေလောက်ဘဲ ဆီသပ်ရင်တော့ အကြာကြီးထားလို့ သိပ်မကောင်းပါဘူး။
မီးအေးအေးမှာ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ တည်ရပါတယ်။ မီးပြင်းပြင်းတင်မိရင် အောက်ဘက်ကတူးလို့ မကျက်တာမကျက်နဲ့ မညီမညာဖြစ်တတ်တယ်။ (အရင်က မြန်မြန်ပြီးအောင်လုပ်ရာက ရသွားတဲ့ သင်ခန်းစာ) ခပ်ခြောက်ခြောက်လေး တည်လိုက်တော့ စကြော်ခါစရဲ့ သုံးပုံတပုံလောက်ဘဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဟင်းချက်ရင် ရေနဲ့နူးပြီး ပြန်ပွါးလာလို့ ၅ခါ ၆ခါလောက်တော့ ချက်လို့ရတယ်။
ဒါက တနေ့က ဥအဲနိုက ဝယ်လာတဲ့ ငါးကလေးကို အိုးကပ်ချက်ထားတာနဲ့ ပုစွန်ဆီပြန်။ အိမ်ကြီးရှင်က ပုစွန်ခေါင်းမစားတော့ ဆီသပ်ပြီးမှ ခေါင်းတွေသပ်သပ် ပြန်ဖြုတ်ရတယ်။
ကျောက်ဖရုံသီးတစိတ်ဝယ်ရင် တခါနေ့စာ ဟင်းခါးချက်ပြီး အများကြီးပိုတယ်။ အဲဒီတော့ အခွံခွါ ပါးပါးလှီးပြီး အိပ်သွပ်လို့ ရေခဲရိုက်ထားလိုက်ပါတယ်။ နောက်တခါ ချက်စားရင် ရေနွေးပူထဲ ထည့်လိုက်ရုံပါဘဲ။ နွေဦးဘက်ရောက်တော့မှာမို့ ကျောက်ဖရုံသီးလဲ ဈေးပြန်တက်လာပြီ။ မရှားခင် ထပ်ဝယ်ပြီး ရေခဲရိုက်ထားဖို့ စိတ်ကူးနေတယ်။
ဝက်နံရိုးကိုလည်း ဈေးတော်ရင် ၃/၄ဗူးလောက် ဝယ်လာပစ်တတ်တယ်။ အဲလိုဘဲ ဂျင်း ဆား အသားမှုန့်နဲ့ နူးပြီး ရေမခမ်းတခမ်းပြုတ်တယ်။ ဝက်နံရိုးပြုတ်ရည်ကိုတော့ သွန်မပစ်ပါဘူး။ ကော်ရည်ခေါက်ဆွဲ၊ ကြေးအိုးချက် ၊ ဟင်းခါးဖြစ်ဖြစ် ချက်ရင် ပြန်သုံးပါတယ်။
ကြေးအိုးလိုမျိုးချက်ရင် အချိန်အတော်ကြာတာမို့ ဒီလို ကြိုလုပ်ထားရင် ချက်တဲ့နေ့ကျ သက်သာပါတယ်။ အများအားဖြင့် ပိတ်ရက်မှာ ဒီလိုမျိုးတွေ ချက်စားဖြစ်တာ။ ပိတ်ရက်ဆိုတော့ မနက်လဲ နေမြင့်မှ ထတာလေ (တခါတလေ နေများ ဝင်တော့မလား မှတ်ရတယ်) အဲလိုအခါကျ ထတာနဲ့ နေ့လည်စာ အမြန်ချက်ရပြီ။ အဆင်သင့် နီးနီးချက်ထားပြီးသားဆိုရင်တော့ လုပ်ရတာ မြန်တယ်။ အသားပြုတ်ရည်ထဲ အစာပလာတွေထည့်တည်၊ ဆန်ကြာဇံတွေကိုတော့ ဒယ်အိုးသပ်သပ်ထဲ အသားပြုတ်ရည်နဲ့တည် အရွက်ထည့် နှမ်းဆီလေးထည့်....
အပ်ချလောင်း!! ရသွားပြီ ကြေးအိုးချက်။
ပျင်းနည်းပျင်းရာ ဟင်းချက်နည်း အဖြာဖြာပါ။ ကိုယ့်ဘာသာတော့ သိပ်မကြာလိုက်ဖူးထင်မိတယ်။ ပရိုတွေ (ဥပမာ အိုဆာကာက အမ)လိုတော့ မမြန်ပါဘူး။ မီးဖိုချောင်ဝင်တဲ့သက်တန်း ၃နှစ်မို့ မတတ်တာတွေ အများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။ ကိုယ့်လက်ရာကိုယ် ကောင်းလှချည်ရဲ့လို့လဲ အာမမခံရဲပါ။ ဘာဖြစ်ဖြစ်စားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ချက်ကျွေးပါတယ်။
Posted by မြရွက်ဝေ at 8:00 PM
April 10, 2010 at 12:29 AM
အသားကိုလည်းမချက်ခင်မနက်တည်းကထုတ်ထားဖို့ အမြဲမေ့တတ်လို့ လန်းဂျိနဲ့ရေခဲဖျော်ရင် အရသာမ၀င် ဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်
၂ယောက်တည်းရှိတဲ့မိသားစုကိုပဲ အပြစ်တင်နေမိတာ ရန်ကုန်အိမ်များဆို တခါချက် အများကြီးဆိုတော့လေ။ မေကတရက်စာထက်ပိုမချက်တာတောင် လူဦးရေများတော့ ပမာဏများတယ်။
နောက်ရက်ဆို အရင်နေ့ကဟင်းကိုမစားချင်တော့ဘူး။ ဒါပေမဲ့ဒီမှာချက်လိုက်မိရင်လည်း များများသွားရော။
ကိုယ့်မြရွက်ဟင်းချက်အဲလောက်တော်တာ ကြည့် ယုံတောင်ယုံချင်ဘူး။
April 10, 2010 at 8:48 AM
မမရေ တခုမှတ်ထားလိုက်ပြီ လာစားမယ်နော် သူများက ကြေးအိုးကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှပဲ
ပရိုတွေ (ဥပမာ အိုဆာကာက အမ) အလဲ့.. အမကို ပရိုလို့ပြောရင် တကယ့်ဟင်းချက်ဆရာကြီးတွေ ကြားလို့ စိတ်လေသွားဦးမယ်... မြန်တယ်ဆိုတာလည်း အလွယ်နည်းတွေ လိုက်နေလို့ပါ အထင်မကြီးနဲ့နော်.. :D